USolwazi Neil Koorbanally, iDini yoCwaningo e-AES.
IKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi (i-CAES) lineDini entsha engamele ucwaningo engungoti we-organic chemistry, uSolwazi Neil Koorbanally oqale lo msebenzi ekuqaleni kukaMbasa.
IDini yoCwaningo eKolishi lihlinzeka ngobuholi bezemfundo kanye nokuxhumanisa ucwaningo nokuqeqeshwa kwasebeneziqu eKolishi, okuhambisana nohlelo locwaningo lweNyuvesi futhi ihola uqeqesho lwabenza i-PhD kwisayensi yocwaningo, ukugxila kwinjulalwazi, indlelakwenza nendlelakubuza, ebe efundisa futhi ecwaninga ngaphakathi kweSikole sakhe. U-Koorbanally uzoluleka izifundiswa ngezinto ezithinta ucwaningo, ahole futhi abheke amakomiti ocwaningio e-CAES, abheke isabelomali socwaningo nezinhlelo zaso, abheke amathuba ocwaningo nokuxhaswa kwalo nokuhlanganyela amathuba ocwaningo. IDini iphinde yeseka izikhungo zocwaningo zaseKolishi, ibambisane neHhovisi loCwaningo ngazo zonke izinto ezithinta ukuphathwa kocwaningo, kuthi ngokuhlanganyela nozakwabo ithuthukise futhi ilandele uhlelo namasu ocwaningo lwaseKolishi. Umele iKolishi eKomitini leNyuvesi lezoCwaningo neNqubonhle, Izigele zeNyuvesi, kanye nokusetshenziswana nabo ezinhlelweni zocwaningo eNyuvesi yonkana.
U-Koorbanally usenze imisebenzi eminingi eNyuvesi kusukela ngesikhathi efika ezoba uthisha e-University of Natal ngowezi-2000, okukhona kukho nokuba uMsizi weDini kwi-Faculty yezeSayensi nezoLimo, iNhloko ye-Science Access noMQondisi wesiKhashana we-CAES. Ngaphambi kwalo msebenzi, ubenguMholi weziFundo eSikoleni seKhemistri neFiziksi.
U-Koorbanally wazuza iziqu zakhe zokuqala, i-onazi, imastazi, nezobudokotela e-University of Natal, wedlula lapho wenza ucwaningo lwakhe e-St John’s College e-University of Cambridge ngowezi-2005.
Njengoba enezinga i-C2 yeNational Research Foundation (i-NRF), u-Koorbanally useke wenza ucwaningo ezindimeni ze-synthetic organic chemistry, i-natural products chemistry ne-medicinal chemistry. Unamaphepha ocwaningo evile kuma-140 emabhukwini ocwaningo aphezulu, igunya elilodwa nencwadi eyodwa eshicilelwe. Umsebenzi wakhe usuxhaswe kaningi okubalwa kukona ukuxhaswa iThuthuka Fund, i-NRF ne-Council for Scientific and Industrial Research
U-Koorbanally uthe umagange ukuphosa esivivaneni ulwazi nobungoti bakhe emsebenzini wocwaningo ovelele weKolishi. Usezinhlelweni zokubambisana phakathi kwezikhungo zocwaningo ezihlonishwayo emhlabeni, amaqembu, oSihlalo boCwaningo nososayensi abahlonishwayo.
‘Ngifisa ukwelekelela nokusungula izingosi ezehlukene zabacwaningi ukuthi basebenzisane ezinselelweni ezinkulu nokuthi abasebenzi abancane babambe iqhaza kumaphrojekthi amakhulu,’ kusho yena.
U-Koorbanally uhlose ukuqinisa umsebenzi wokubambisana weKolishi nabangaphandle kwekolishi bomhlaba nabasekhaya, ukwelekelela izicelo zomxhaso nokwenza ukuthi abacwaningi bathole imifundaze yemisebenzi ehlanganise imikhakha ehlukene.
U-Koorbanally usebenza kwi-Phytochemical Society of Europe, i-American Society of Pharmacognosy ne-South African Chemical Institute. Ungumbuyekezi we-NRF namabhuku ocwaningo i-Phytochemistry, i-Planta Medica, i-Journal of Ethnopharmacology ne-Phytochemistry Letters. Uyilungu labeluleki babahleli bebhodi le-Natural Product Communications kanti wayeyingxenye ye-International Council of Science ngowezi-2006 neqembu le-Health and Human Well Being Scoping.
Useluleke noma wahlanganyela ekululekeni abafundi beziqu zobudokotela abangama-25, nabangama-21 abenza imastazi.
‘SiyiKolishi, siyabonga kuSolwazi Koorbanally ngokuvuma lesi sikhundla kanti sinethemba kumagalelo akhe kule minyaka emihlanu ezayo,’ kusho iPhini leSekelashansela EliyiNhloko ye-CAES, uSolwazi Albert Modi.